Zimbabwe President Urges Court to Toss Opposition Challenge | Newsmax.com
FARAI MUTSAKA Wednesday, 15 August 2018 05:38 AM
HARARE, Zimbabwe (AP) — Lawyers representing Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa have filed papers urging the country's Constitutional Court to throw out an opposition challenge to his disputed election.
The Zimbabwe Electoral Commission has said Mnangagwa and the ruling ZANU-PF party won the July 30 election in this politically and economically troubled southern African country's first election without former long-time ruler Robert Mugabe on the ballot. The electoral commission said Mnangagwa received 50.8 percent of the vote and main challenger Nelson Chamisa received 44.3 percent.
Chamisa's challenge "has no legal merit," said Paul Mangwana, a lawyer and the ruling ZANU-PF spokesman.
Mnangagwa was forced to cancel an inauguration ceremony planned for last Sunday because of the court challenge. Zimbabwe's law states that the case should be finalized within 14 days of the results, which were announced on Aug. 3.
Lawyers representing Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa have filed papers urging the country's Constitutional Court to throw out an opposition challenge to his disputed election.The Zimbabwe Electoral Commission has said Mnangagwa and the ruling ZANU-PF party won the...
Wednesday, 15 August 2018 05:38 AM